Wepamusoro mashanu Bhenefiti Ekutora Phosphatidylserine (PS) -Ane mvumo
musha > Phosphatidylserine (PS)
Pamusoro mashanu mabhenefiti Ekutora Phosphatidylserine (PS)
Mune maonero edu, iyo Phosphatidylserine ndiyo yakanakisa yekuwedzera iyo iripo mumusika kubva kuCofttek. Isu tinopa zvikonzero zvedu mukutsigira iyi sarudzo. Kutanga, ichi chinowedzera chinopa yakanakisa kukosha kwemari - mugungwa rezvinhu zvinodhura, ichi Phosphatidylserine yekuwedzera inowira padivi rinodhura. Chechipiri, ichi chinowedzererwa naCofttek chinoitwa mune yakaongororwa nzvimbo uye nekudaro, mhando yayo inogona kuyedzwa. Chigadzirwa chacho chakaedzwawo kuchena pamwe nesimba. Saka, kana iwe uri kutsvaga kutenga yakanaka Phosphatidylserine yekuwedzera, ndapota taura nesu pa cofttek.com.
Phosphatidylserine (PS) MIBVUNZO
Chii chinonzi Phosphatidylserine (PS)?
Phosphatidylserine (PS) inonzi phospholipid uye mukomboni iri padyo nefibre yezvikafu inowanzo kuwanikwa muhunhu hwevanhu. Phosphatidylserine inoita basa rakakosha mukuvhara basa uye yakakosha pakuziva mashandiro sezvo Phosphatidylserine inobatsira kuendesa mameseji pakati pemasero etsinga.
Paavhareji, chikafu chekuMadokero chinopa pedyo negumi nemashanu mg yePhosphatidylserine mazuva ese. Hove nenyama zvinhu zvakanaka zvePhosphatidylserine, iyo inowanikwawo mune isina kuwanda mune zvigadzirwa zvemukaka uye miriwo. Soy lecithin imwe yakanaka sosi yePhosphatidylserine. Nekudaro, kunyangwe Phosphatidylserine inogona kuvezwa nemuviri pamwe nekudyiwa kuburikidza neyekudya muchimiro chezvisikwa zvakasikwa, ongororo yekutanga inoratidza kuti huwandu hwayo hunodzikira nezera. Saka, mazuva ano, Phosphatidylserine supplementation inokurudzirwa, kunyanya mune vanhu vakuru kunyoresa chero kuderera kwekuyeuka uye kuziva basa.
Kwemakore mashoma apfuura, kudiwa kwePhosphatidylserine zvinowedzera zvakanyanyisa kubvira Phosphatidylserine zvinowedzerwa zvinoonekwa semushonga wepanyama wemamiriro ezvinhu akasiyana siyana, senge kushushikana, Alzheimer's, kucherechedzwa-kusagadzikana kusagadzikana, kushushikana, kushushikana uye multiple sclerosis. Izvo zvakaparadzana, Phosphatidylserine zvinowedzera zvinozivikanwa zvakare kusimudzira kubuda kwepanyama, kurovedza muviri kuita, kushushikana uye kurara.
Mune chino chinyorwa, pamwe nekukurukura zvinoverengeka zvakakosha mabasa uye mabhenefiti aPhosphatidylserine, isu zvakare tichachera zvakadzama kuratidza zvakanakisa Phosphatidylserine supplement iripo mumusika.
Chii chakanakira phosphatidylserine?
Phosphatidylserine chinhu chine mafuta chinonzi phospholipid. Iyo inovhara uye inochengetedza masero muuropi hwako uye inotakura mameseji pakati pawo. Phosphatidylserine inoita basa rakakosha pakuchengeta pfungwa dzako uye ndangariro dzakapinza. Zvidzidzo zvemhuka zvinoratidza kuti mwero wechinhu ichi muuropi unoderera nezera.
Ko phosphatidylserine inoshanda here?
Kutora phosphatidylserine kunogona kugadzirisa zvimwe zvezviratidzo zvechirwere cheAlzheimer mushure memasvondo matanhatu kusvika matanhatu ekurapwa. Inoratidzika kunge inoshanda zvakanyanya kune vanhu vane zviratidzo zvishoma zvakanyanya. Zvisinei, phosphatidylserine inogona kurasikirwa nekushanda kwayo nekuwedzerwa kushandiswa.
Ko phosphatidylserine inoita kuti uve nehope here?
Phosphatidylserine ndeye phospholipid zvinovaka muviri inowedzera iyo inomisa kugadzirwa kwakanyanya kwecortisol mumuviri, ichibvumira isina hutano, yakakwidziridzwa yecortisol kuderera, uye nekudaro, kurara kuzorodza kuti kuitike.
Ndezvipi zvakanakira phosphatidylserine?
Ngatitarisei kune mamwe mabhenefiti akakosha aPhosphatidylserine (PS):
① Icho Chinobudirira Kurapa Sarudzo Kupokana neCognitive Kuderera uye Dementia
Ongororo yekutanga yakaitwa pamhuka yakaratidza kuti kuwedzerwa kwenguva refu kwePhosphatidylserine kunogona kudzikisira mwero wekuziva kwekudzikira kana kuudzosera zvachose mumakonzo. Zvichitevera mhedziso dzakanaka idzi, zvidzidzo zvakaitiswa kuti zviongorore zvinoitwa nePhosphatidylserine kudya pavanhu uye ongororo dzinoverengeka dzakatsigira chokwadi chekuti 200 mg intravenous supplementation yePhosphatidylserine kuvarwere veAlzheimer inowedzera huwandu hwedopamine uye serotonin, iwo mahormone maviri anonyora kuderera kukuru neimwe nzira. nekuda kwechimiro. Zvinotonyanya kukosha, Phosphatidylserine inoitawo basa rakakosha rekuchengetedza glucose metabolism, iyo inopawo zororo kubva kuchirwere. (2) Yakapepetwa: Phosphatidylserine uye huropi hwemunhu
② Iyo Inoshandiswa Zvakajairika kune Yayo Nootropic Mhedzisiro
Phosphatidylserine yekuwedzera inowanzopihwa kune vanhu vekare kuti vagadzirise kutarisisa kwavo pamwe nekuderera kwehunyanzvi hwekufunga. Yekutanga tsvagurudzo iyo yakadzidza mhedzisiro yePhosphatidylserine pane yekurangarira basa muvanhu vakura vasina-pathological kushushikana kwepfungwa kwakabatana 300mg soy-based Phosphatidylserine kudya kwemwedzi mitatu nekuvandudzwa kwekuona. Imwezve ongororo yakaongorora mhedzisiro yemafuta ehove Phosphatidylserine mundangariro uye yakaratidza kuti Phosphatidylserine supplementation yakavandudza izwi rekarekuita chiitiko muvanhu vekare kusvika kusvika pa42%. Saka, Phosphatidylserine zvirokwazvo ine nootropic maitiro pamuviri. Nekudaro, kutsvaga kwekuita kwechirimwa-chinobva paPhosphatidylserine mukudzivirira kukanganiswa nezera-kurangarira kurasikirwa ishoma uye basa rakawanda rinodiwa munzvimbo ino.
③ Phosphatidylserine Kudya Kunosanganisirwa neKuwedzeredza Exercise Performance
Chirevo chakaburitswa muSports Medicine chakaratidza kuti kune humbowo hwakakwana kuratidza kuti Phosphatidylserine yekuwedzera inosanganiswa nekuvandudzwa kwemitambo uye kugona kugona. Chidzidzo ichi chakataura zvakare kuti Phosphatidylserine yekuwedzera inowedzera inoderedza kusuruvara kwemhasuru pamwe nenjodzi yekukuvara. Saizvozvowo, kumwe kuongorora kwakaratidza kuti Phosphatidylserine yekuwedzera kwemavhiki matanhatu yakavandudza mashandiro anoita gorofu uye nekubatanidza Phosphatidylserine ne caffeine uye vhitamini inoderedza kunzwa kwekuneta mushure mekudzidzira. Zvisinei, inofanira kuchengetwa mupfungwa kuti izvi zvigadziridzo hazvina kunyanya kunyorwa.
Osp Phosphatidylserine Inobatsira Kurwisa Kuora Mwoyo
Muna 2015, ongororo yakaburitswa muMental Illness yakaratidza kuti muvanhu vane makore makumi matanhatu nemashanu zvichikwira, kugara Phosphatidylserine, DHA uye EPA kudya kunogona kudzora kushushikana. Saizvozvowo, kumwe kuongorora kwakaratidza kuti Phosphatidylserine supplementation inosimudzira manzwiro ekugutsikana uye mufaro mushure mekurovedza muviri nekudzora huwandu hwekushushikana-kwakakonzera cortisol kureva iyo inoshungurudza hormone
⑤ Inogona Kushandiswa Kurapa ADHD muVana
Chidzidzo chegore ra 2012 chakadzidza mhedzisiro yePhosphatidylserine pavana vane ADHD kana kutarisa kushomeka hyperactivity disorder. Vana mazana maviri neADHD vakapinda muchidzidzo ichi, vakagumisa kuti vhiki gumi neshanu yekurapa vachishandisa Phosphatidylserine musanganiswa omega-200 fatty acids inoshanda kurapa ADHD. Vana vakapihwa kusanganisa uku vakanyoresa kudzora kana kuita zvisina hunhu uye kwakawedzera mamiriro. Muna 15, kumwe kuongorora kwakaitwa kuongorora phosphatidylserine kuisa placebo muvana makumi mana nemana vari kurwara neADHA kwemwedzi miviri. Pakupera kwekudzidza, boka rekurapa rakaratidza kuvandudza kuyeuka nekutarisisa.
Kunze kwezvibatsiro zvataurwa pamusoro apa, Phosphatidylserine supplementation zvakare yakabatana neinogadziridza anaerobic yekumhanya simba, yakaderedzwa kupera simba uye zvirinani kugadzirisa kurongeka uye kumhanya.
Chii chinonzi chimiro chephosphatidylserine?
Phosphatidylserine phospholipid - kunyanya glycerophospholipid - iyo ine maviri emafuta acids akabatanidzwa mu ester linkage kune yekutanga neyechipiri kabhoni yeglycerol uye serine yakasungirirwa kuburikidza ne phosphodiester linkage kune yechitatu kabhoni yeglycerol.
Nei Tichida Phosphatidylserine (PS)?
Mamwe mazuva, uropi hwedu hunonzwa kunge hwazara uye haugone kuita chero basa. Muzviitiko zvakawanda, izvi zvinoitika nekuda kwekudzikira kwekuziva kwekuita, nyika inowanzoitika kune vakwegura asi isingawanzoitika kune vechidiki vakuru. Kwemakore mashoma apfuura, masayendisiti nevanoongorora vakaratidza chivimbo chakakura mukugona kwaPhosphatidylserine kurapa kudzikira kwekuziva basa. Zvinotonyanya kukosha, kukura kwekutsvagisa munzvimbo kwakaburitsa vanhu kune zvimwe zvakanaka zvePhosphatidylserine, senge kugona kwayo kurapa mamiriro, senge chirwere cheAlzheimer uye ADHD pamwe nekukwanisa kwayo kusimudzira kurara uye kuwedzera mweya.
Tisati tapinda mune izvo zvinoitwa nePhosphatidylserine kumuviri wemunhu, ngatitangei tinzwisise chinonzi Phosphatidylserine (PS).
Ndeapi maPhosphatidylserine (PS) Anoshandisa?
Kwemakore mashoma apfuura, kudiwa kwePhosphatidylserine zvinowedzera zvakawedzera zvakanyanya nekuda kwekushandisa kwakawanda kwePhosphatidylserine (PS). Kune kutanga, Phosphatidylserine inoshanda kwazvo mukusimudzira kugona kwekuziva uye kudzikisira kudzikira kwekuziva. Saizvozvowo, yakaratidzawo kuve inoshanda kurwisa ADHD muvana pamwe nevakuru uye nenzira kwayo kugadzirisa kurwisa-kunokonzera kushushikana nekudzora mazinga ecortisol mukati memuviri. Iyo inozivikanwa zvakare kusimudzira kutarisisa kwemunhu, kushanda ndangariro uye kuburitsa kuburitsa. Phosphatidylserine inozivikanwawo kunge iri yekunzwa uye yekurara inosimudzira. Nekuda kwezvose izvi zvikonzero uye nezvimwe, kudiwa kwePhosphatidylserine zvinowedzera zvakawedzera zvakanyanya mumakore mashoma apfuura.
Yakawanda sei phosphatidylserine yandinofanira kutora kudzikisa cortisol?
Iyo chaiyo muyero we Phosphatidylserine (PS) zvinoenderana nerubatsiro rwairi kuitirwa. Kubvumirana kwakawanda ndekwekuti muyero wakajairika we100 mg, inotorwa katatu pazuva, nekudaro inokwana 300 mg zuva nezuva, zvese zviri zviviri zvakachengeteka uye zvinobudirira pakurwisa kudzikira. Kune rimwe divi, apo Phosphatidylserine iri kushandiswa kurapa ADHD, muyero wakaenzana we 200 mg pazuva unofungidzirwa wakanakira vana uye 400 mg pazuva inoonekwa seyakanaka kuvanhu vakuru. Kune yeAlzheimer's, muyero we300-400 mg unoonekwa unodiwa. Kana phosphatidylserine yekuwedzera iri kushandiswa kunatsiridza kuburitsa maekisesaizi, vashandisi vanokumbirwa kuti vasapfuure iyo 300 mg muyero weyero pazuva.
Unoderedza sei mazinga ecortisol?
Iwe unogona kutora iyo yekuwedzera yePS pazuva kwemazuva gumi ane blunted cortisol mhinduro pamberi uye panguva yekurovedza-inokonzera kushushikana.
Chii chinonzi cortisol mumuviri wako?
Cortisol iri steroid hormone iyo inodzora akasiyana siyana maitiro mukati memuviri wese, kusanganisira metabolism uye immune immune mhinduro. Iinewo basa rakakosha mukubatsira muviri kupindura kunetseka.
Yakawanda sei phosphatidylserine iri mu soy lecithin?
Izvo zvinhu zvikuru zvekutengesa leyagabhini-inotorwa nesoybean ndeaya: 33-35% Soybean mafuta. 20-21% Phosphatidylinositols. 19-21% Phosphatidylcholine.
Phosphatidylserine inowanikwa mune soy lecithin ingangoita 3% yeiyo yakazara phospholipids.
Unofanira kutora rinhi phosphatidylserine?
Phosphatidylserine inoshanda muchikamu chekutanga, apo huwandu hwecortisol hwakakwira. Izvo zvakanyanyisa kutorwa kana mazinga ecortisol ari pakakwirira kwazvo. Semuenzaniso, urikumuka here kuti unetseke mamiriro nekuda kwekumanikidzwa-kwebasa? Tora iyo mangwanani kudzivirira kusagadzikana uye kuwedzera kunetseka.
Ko phosphatidylserine inofanira kutorwa husiku here?
Phosphatidylserine (PS 100; tora imwe kusvika mbiri panguva yekurara). Phosphatidylserine ndeye phospholipid zvinovaka muviri inowedzera iyo inomisa kugadzirwa kwakanyanya kwecortisol mumuviri, ichibvumira isina hutano, yakakwidziridzwa kortisol kuderera, uye nekudaro, kurara kuzorodza kuti kuitike.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti phosphatidylserine itange kushanda?
Kutora phosphatidylserine kunogona kugadzirisa zvimwe zvezviratidzo zveAlzheimer chirwere mushure memavhiki matanhatu kusvika matanhatu ekurapwa. Zvinoita kunge zvinoshanda zvakanyanya muvanhu vane zviratidzo zvishoma.
Ndeipi mhedzisiro yem phosphatidylserine?
Phosphatidylserine inogona kukonzera mhedzisiro senge kushaya hope uye kushungurudzika mudumbu, kunyanya pamadosi anopfuura 300 mg. Pane kumwe kunetsekana kuti zvigadzirwa zvakagadzirwa kubva kunzvimbo dzemhuka zvinogona kuendesa zvirwere, zvakaita sekupenga chirwere chemombe.
Ndeupi musiyano uripo pakati peL serine uye phosphatidylserine?
L-serine iamino acid yakakosha mukuumbwa kwephosphatidylserine, inova chikamu chemukati memasero ehuropi (kureva, mauroni). Inogona kugadzirwa mumuviri, kusanganisira huropi, asi kwokunze kupihwa kubva mukudya kwakakosha mukuchengetedza matanho anodiwa.
Chii chinokonzera kushaya serine?
Serine kushomeka kusagadzikana kunokonzerwa nehurema mune imwe yevatatu synthesising enzyme yeiyo L-serine biosynthesis nzira.
Chii chinoitwa naL Tyrosine kumuviri?
Unogona kuona tyrosine inotengeswa mune yekuwedzera fomu pamwe kana isina "L." Tyrosine iripo mumatishu ese emuviri wemunhu uye mune akawanda emvura. Inobatsira muviri kuburitsa ma enzymes, thyroid mahormone, uye ganda pigment melanin. Inobatsirawo muviri kuburitsa maurotransmitter ayo anobatsira maseru etsinga kutaurirana.
Chii chinoshanda serine?
Serine ipolar amino acid iyo inoita chinzvimbo chakakosha mukudyara kwemiti, kukura kwezvirimwa, uye kusaina maseru. Pamusoro pekuva chivakwa chemapuroteni, Serine anotora chikamu mu biosynthesis ye biomoleculem seamino acids, nucleotides, phospholipids, uye sphingolipids.
Ndezvipi zvikafu zvakakwira mu phosphatidylserine?
Unogona kusimbisa kudya kwako phosphatidylserine kunyangwe chikafu — chinowanikwa muzvikafu zvinoverengeka, zvinosanganisira soy (inova ndiyo sosi huru), bhinzi chena, mazai emazai, chiropa chehuku, uye chiropa chemombe.
Ndeapi mabhenefiti ehutano e phosphatidylserine?
Mavitamini, zvicherwa, uye micronutrients mu phosphatidylserine zvinopa zvimwe zvakakosha zvehutano. Phosphatidylserine inozivikanwa kuita se antioxidant, ichibatsira kudzikisa mhedzisiro yenjodzi yemahara yemuviri wako. Izvi zvinogona kubatsira kudzikisa njodzi yako yekuvandudza mamiriro akaita seshuga nekenza.
Ko phosphatidylserine inoshanda sei sechiratidzo cheapoptosis?
Evanhu phospholipid scramblases (hPLSCRs) anotamba akakosha mabasa mune akakosha maseru maitiro. hPLSCR1 inokonzeresa apoptosis ne phosphatidylserine exposure mediated phagocytosis. hPLSCR3 inopindirana ne cardiolipin exposure mediated apoptosis mu mitochondria.
Ko phosphatidylserine amino asidhi here?
L-serine iamino acid yakakosha mukuumbwa kwe phosphatidylserine, inova chikamu chemukati memasero ehuropi (kureva, mauroni). Inogona kugadzirwa mumuviri, kusanganisira huropi, asi kwokunze kupihwa kubva mukudya kwakakosha mukuchengetedza matanho anodiwa
Ndeipi iri basa guru rePhosphatidylethanolamine?
Phosphatidylethanolamine inotora chikamu musangano re lactose permease nemamwe mapuroteni e membrane. Inoita se 'chaperone' kubatsira iyo membrane mapuroteni kunyatso kupeta zvivakwa zvavo zvepamusoro kuti vakwanise kushanda nemazvo.
Unogona here kuva ne choline yakawandisa?
Kuwana choline yakawandisa kunogona kukonzera munhuwi wehove wehove, kurutsa, kudikitira kwakanyanya uye mate, yakaderera BP, uye kukuvara kwechiropa. Kumwe kutsvagurudza zvakare kunoratidza kuti huwandu hwakawanda hwe choline hunogona kuwedzera njodzi yehosha yemoyo.
Ko phosphatidylserine ine lipid here?
Phosphatidylserine (PtdSer), chinhu chakakosha cheiyo eukaryotic membranes, ndiyo yakawanda kwazvo anionic phospholipid mune eukaryotic cell accounting inosvika kusvika gumi muzana yeiyo yakazara cellid lipid. Zvakawanda zve izvo zvinozivikanwa nezve PtdSer ibasa exofacial PtdSer inotamba mu apoptosis uye kugwamba kweropa.
Chii chinonzi phosphatidylcholine chinoshandiswa?
Phosphatidylcholine inoshandiswawo pakurapa hepatitis, eczema, chirwere chenduru, matambudziko ekutenderera, cholesterol yakawanda, uye premenstrual syndrome (PMS); yekuvandudza kushanda kweitsvo dialysis; yekusimudzira immune system; uye zvekudzivirira kuchembera.
Ko phosphatidylserine zwitterionic here?
Mapuroteni akadaro anosunga zvisina kunaka phospholipids (cardiolipin, phosphatidylglycerol, phosphatidylserine, phosphatidylinositol) asi kwete zwitterionic kana kwazvakarerekera phospholipids (phosphatidylethanolamine, phosphatidylcholine).
Ko phosphatidylserine yakafanana ne phosphatidylcholine here?
Iyo phospholipids phosphatidylserine (PS) uye phosphatidylcholine ndiyo yechipiri inonyanya kugamuchirwa zvinhu zvevakuru vakuru vane zvichemo zvekurangarira nevaridzi vezvinowedzera zvekudya.
Ko phosphatidylcholine yakaderera cholesterol?
Oral polyunsaturated phosphatidylcholine inoderedza platelet lipid uye cholesterol zvirimo mune vane hutano vanozvipira.
Ko phosphatidylserine inobatsira kuonda?
Muchidimbu, phosphatidylserine inobatsira nekudzikisa uremu nekudzora mazinga ecortisol. Heano mashandiro ayo: mukupindura kushushikana, adrenal glands inogadzira hormone inonzi cortisol. Iyo inokurumidza kupinda muropa uye inokutendera iwe kuti ugone kubata nemamiriro ekunze.
Phosphatidylserine (PS) Yakachengeteka here?
Tsvagurudzo yakaitwa kusvika parizvino inoratidza kuti Phosphatidylserine inoregererwa nemuviri uye painotorwa nemuromo, zvakachengeteka kutora Phosphatidylserine kwemwedzi mitatu nemiyero yezuva nezuva isingadariki 3 mg pazuva. Vana vanogona kutora izvi zvinowedzera kusvika kumwedzi mina. Nekudaro, kudarika muyero wezuva nezuva kupfuura 300 mg pazuva kunogona kutungamira kumhedzisiro senge kushaya hope uye nenyaya dzemudumbu. Vakadzi vane pamuviri uye vanoyamwisa vanofanirwa kugara kure nePhosphatidylserine zvinowedzera sezvo pasina humbowo hwakakwana kuratidza kuti izvi zvinowedzera zvakachengeteka kumapoka aya.
Vanhu vazhinji vanofarira zvinomera zvinodyarwa nePhosphatidylserine sezvo zvinofungidzirwa kuti mhuka dzinowedzerwa pamhuka dzinoratidzira vashandisi kuzvirwere zvinokonzerwa nemhuka. Nekudaro, hapana chidzidzo chekutsvaga chakawana chero humbowo hwechokwadi hwekutsigira iyi pfungwa.
Ndekupi Kutenga Phosphatidylserine (PS) Powder muhuwandu?
Kunyangwe iwe uri kambani inogadzira Phosphatidylserine zvinowedzera kana munhu anoda kutenga Phosphatidylserine (PS) poda muhuwandu kune chero zvimwe zvinangwa, nzvimbo yakanakisa yekutenga cofttek.com.
Cofttek inowedzeredza mbishi zvinhu zvinogadzira zvave zviri mumusika kubvira 2008. Iyo kambani yakazvipira kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye ine-ine hunyanzvi uye ine ruzivo timu yekutsvagisa iyo inoshanda kutenderera-iyo-wachi kuona kuti vatengi vari kuwana zvakanakisa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvemari yavo. Cofttek yatove nevatengi uye vatengi munzvimbo dzakasiyana dzeIndia, China, Europe neNorth America. Iyo zvakare ine yakatsaurirwa yekutengesa timu iyo inovimbisa vese vatengi vekambani vanoshanduka kuve vanofara vatengi Iyo Phosphatidylserine poda inopihwa neCofttek inouya iri mumabatch e25 kilograms uye inogona kuvimbwa bofu kwehunhu uye kuvimbika. Saka, kana iwe uri kutarisa ku tenga Phosphatidylserine (PS) upfu muhuwandu, usatengese kune imwe nzvimbo asi kuCofttek.
(2) Yakapepetwa: Phosphatidylserine uye uropi hwemunhu
(3) Mhedzisiro yephosphatidylserine yekuwedzera pane yekudzidzira vanhu
(4) Lecithin phosphatidylserine uye phosphatidic acid yakaoma (PAS) inoderedza zviratidzo zveiyo premenstrual syndrome (PMS): Mhedzisiro yechirongwa chekiriniki yakasarudzika, inochengetedzwa nenzvimbo, uye yakapofumadza.
(13) Wepamusoro mashanu mabhenefiti ekutora pyrroloquinoline quinone (pqq).